Ọkwa ọkwa nchụpụ nke TCDD! KPSS 2019 / 1 - RayHaber
HomeTurkeyCentral Anatolia Region06 AnkaraỌkwa ọkwa nchụpụ nke TCDD! KPSS 2019 / 1
29 / 07 / 2019 Levent Elmastaş 06 Ankara, Central Anatolia Region, ụgbọ okporo ígwè, General, oru, Isi akụkọ, Turkey, TCDD 0
tcddden kpssden ọkwa ọrụ ọkwa
Onye isi oche nke TCDD nyere ọkwa iji nye ozi banyere nhọpụta etiti 2019 / 1 KPSS na usoro ndị ọrụ ga-arụ na nzukọ ahụ.
Onye isi oche nke OSYM nke 2019 / 1 KPSS kwupụtara nsonaazụ nke mmasị ọrụ etiti. Director General nke Turkish State Railways (TCDD) nke nsonaazụ nke ndị isi oche nke OSYM kwupụtara nyere ọkwa banyere nhọpụta ndị a.
N’ozi ọkwa ụlọ ọrụ ahụ, ndị ọrụ enyerela ha ọrụ ahụ, na-akọwapụta azụmahịa ha ga-arụ n’usoro na-eso, nyekwara ozi maka nnyefe akwụkwọ a.
ANYANWU ANYANWU SITE N’IGWU NWA ANYA N’AKA TCDD
Nkwupụta Ahụ Ọdụ Ahụike
Maka ndị a họpụtara ahọpụta aha ha na ntinye aha Condenser, Onye isi, Injinia na Onye Ntụgharị; A ga-enwetara Health Board Report site na ụlọ ọgwụ zuru ezu ma ọ bụ ụlọ ọgwụ gọọmentị.
Maka ndị ahụ a họpụtara aha ha ka aha ya bụ Wagon Technician, Medical Board na-akọ na ha ga-enweta site na itlọọgwụ steeti Fully ma ọ bụ Universitylọ Akwụkwọ Ọgwụ University ga-agụnye nkọwa ndị a.
Nnyocha agba (ule ule Ishihora rụrụ)
Ogo nke ọhụụ (anya aka ekpe ekpe gosiri iche)
Nnwale nyocha (maka mkpali na ọgwụ, ihe ga-esi na ya pụta ga-abụ ihe ọjọọ)
Nyochaa ntị (nkezi nke ụda dị ọcha n'ihi ụda akpịrị okwu nụrụ site na mita ole)
Nsonaazụ nyocha ọbara zuru ezu (Nyocha ọbara zuru oke-AST-ALT-GGT-Urea-Creatinine-Hbs Ab-Hbs Ap-HIV-HCV-T3-T4-T5H)
Ogo, oke, BMI, Ọbara Ọbara, X-ray, Nyocha arụ Pulmonary, Nnyocha irighiri akwara.
Na mgbakwunye, ndị aga-eme ka a họpụta ka ọ bụrụ Wagon Technician kwesịrị inwe ihe ịga nke ọma na Nnyocha akparamaagwa nke Institution anyị ga-arụ.
2) Ụdị Ntụle Ọgụgụ N'uba Na-adịghị Anya 2 (Ọ bụrụ na e debere akwụkwọ diploma mbụ, a ga-akwado onye na-enye ikike nke TCDD Taşımacılık A.Ş.
3) 2 Number nke diplọma diploma ma ọ bụ akwụkwọ nwetara site na Ụlọ akwụkwọ (Maka ndị nwere afọ 4 ma ọ bụ Ntọala + 3 afọ ọmụmụ)
4) Nsuso 2 Number Discharge Certificate (Maka ndị jere ozi agha) ma ọ bụ Asambodo Ọnọdụ Agha (Ndị a kwụsịtụrụ) (nwere ike nweta ya site na ụlọ ọrụ ma ọ bụ usoro e-ọchịchị)
5) 2 Nọmba Nhọrọ Kaadị Kaadị Ama (Ọ bụrụ na e debere kaadị mbu, a ga-anakwere onye nwe ikike nke TCDD Taşımacılık A.Ş.)
6) 2 Number YDS Nọmba Asambodo Nweta (Ndị nwere asambodo nsonaazụ YDS na ọkwa ABC ga-ewetakwa akwụkwọ n'ihi na a ga-emetụta ụgwọ nkwekọrịta.)
7) 2 Nọmba Njikere Ọrụ (Maka ndị na-arụ ọrụ n'okpuru ụlọ ọrụ nchedo ọ bụla) (Enwere ike nweta ya site na ụlọ ọrụ ndị metụtara ya ma ọ bụ usoro e-ọchịchị)
8) Nkwupụta Adreesị (enwere ike nweta ya site na ụlọ ọrụ ndị metụtara ya ma ọ bụ usoro e-ọchịchị)
9) foto nke emere na ọnwa 6 ikpeazụ (+ 6 maka ụdị nyocha nyocha nke Psychotechukun nke ndị ọrụ Wagon)
10) 2 Ọnụ ọgụgụ nke Criminal Records (nwere ike nweta site na ụlọ ọrụ ndị metụtara ma ọ bụ usoro e-ọchịchị)
11) 2019-1 KPSS Ntinye Nyefee Akwụkwọ
12) Nyocha nyocha na mpempe akwụkwọ nyocha Archive >>
Ndi choro ime ha kwesiri itinye aka na ndi mmadu ndi mmadu nke TCDD Transportation Inc. (Adreesị: Anafartalar Mahallesi Hipodrom Street No: 30 Station - Altındağ / ANKARA) n'etiti 23 July - 2019 August 3 site na ịkwadebe ihe edere edere.
Ngwa 23 August emere mgbe ngwụsị nke ọrụ ọrụ 2019 na / ma ọ bụ site na post agaghị anabata ya.
TCDD Ụgbọ njem KPSS 2018 / 1 Ịkpọ ọkwa ọkwa 17 / 07 / 2018 TCDD Transport mara ọkwa ọkwa nke ndị ọrụ. Na ọkwa ahụ e bipụtara na ebe nrụọrụ weebụ gọọmenti nke ụlọ ọrụ, KPSS 2018 / 1 bụ isi ihe ọmụma nyere ndị a ga-ahọrọ ndị ọrụ nke ụlọ ọrụ ahụ n'ime ọrụ ahụ. Akwụkwọ ndị chọrọ maka ịhọpụta ndị ga-aga ịbanye na ụlọ ọrụ ahụ na ọkwa ndị dị mkpa ekwuputala. Mmasị KPSS 2018 / 1 na ndị ọrụ ụgbọ njem TCDD na-etinye na akụkọ nlekọta ahụike, nọmba 2 nke diploma diploma, nọmba 2 nke akwụkwọ nchịkwa, nọmba 2 nke kaadị e depụtara, akwụkwọ ndekọ YDS, ọ bụrụ na ọ dị mkpa ka ọ bịa. Tụkwasị na nke ahụ, akwụkwọ ọrụ, nkwupụta okwu, foto 6, ntinye aha 2 na nchọpụta nche na archive arşiv
KPSS 2017 / 1 na ọkwa TüLOMSAŞ 26 / 07 / 2017 The ngo (Turkey Locomotive na Engine Industry Co., Ltd.) site Directorate General KPSS 2017 / 1 rurula oru na ọkwa bipụtara ojii na-aga ime. A mara ọkwa akwụkwọ ndị a chọrọ. The ngo (Turkey Locomotive na Engine Industry Co., Ltd.) site Directorate General KPSS 2017 / 1 rurula oru na ọkwa bipụtara ojii na-aga ime. Dị ka nkọwa KPSS 2017 / 1 si kwuo, ndị a ga-etinye na TÜLOMSAŞ cadres (Engineer, Officer) na akwụkwọ ndị achọrọ 4 August 2017 ga-etinye aka ruo ụbọchị ahụ. Ndị KPSS 2017 / 1 na ndị TÜLOMSAŞ na-etinye na akwụkwọ ndị a chọrọ; Photocopy nke kaadị njirimara, akwụkwọ akwụkwọ, akwụkwọ ikike agha, akwụkwọ ndekọ mpụ, akụkọ ahụike, ụkọ
TCDD 704 Officer Ịzụcha! KPSS 2017 / 2 Center Assignment 21 / 11 / 2017 TCDD na-anakọta ndị ọrụ 2017 maka ọrụ KPSS 2 / 704 nke etiti. Ngwa na-agwụcha, gịnị bụ nkọwa. Transportation, Republic of Turkey, bụ nke dị na Maritime Affairs na Communications Ministry of Railways emezu a ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị ọrụ na-arụ ọrụ na n'ikuku afọ iji jiri na-ụlọ. N'afọ ahụ, TCDD na-azụ ahịa nke ndị na-eyi ọha egwu ma ọ bụ ndị omempụ n'ozuzu ha site na İŞKUR, ebe ọ bụ ọrụ ntinye na-arụ ọrụ nke etiti. Dị ka Republic of Turkey General Directorate of State Railways Administration na onye òtù iji jiri na-ụlọ KPSS 2017 / 2 kpuchie ...
TCDD Transportation Inc. kwupụtara KPSS 2017 / 2 Ọrụ Nsonaazụ 15 / 03 / 2018 TCDD Transportation Co. Na ọkwa a mere na ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị nke General Directorate nke KPSS 2017 / 2 n'ihi nchịkọta nke ndị nominyere ndị kpebiri mara ọkwa. Na ọkwa nke TCDD Taşımacılık A.Ş., duyuru Nke a mara ọkwa bụkwa ihe mgbakwunye maka ọkwa. Nkwupụta kwuru. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, a mara ọkwa aha ndị dị na listi a na-ebipụta na ha agaghị enwe oge ha nwere ike ịga n'ebe ọrụ ozugbo. Ị nwere ike iru nsonaazụ nke ọrụ ahụ na ndị mmeri na-echesi ike site na ịpị ebe a.
TCDD Transport Corporation KPSS 2017 / 2 Ọrụ Nsonaazụ 2. Dezie ọkwa 21 / 03 / 2018 TCDD Transportation Inc. General Directorate nke ọkwa ahụ mere na saịtị weebụ KPSS 2017 / 2 dịka ndị sitere na ndị nominepụtara site na ndị a họọrọ. Na ọkwa nke TCDD Taşımacılık A.Ş. Ndị Candidates na-enweta ọrụ na ndepụta ahụ nwere ike ịmalite na-echeghị ịkpọ òkù na adreesị ha N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, a kpọsara ndị ahụ a họpụtara ahọpụta ozugbo na listi ndị e bipụtara ka ha ghara inwe ike ịga ọrụ. KPSS 2017 / 2 1. KPSS 2017 / 2 2 XNUMX XNUMX XNUMX pịa ndepụta
TCDD Transport Corporation KPSS 2017 / 2 Ọrụ Nsonaazụ 3. Dezie ọkwa 26 / 03 / 2018 TCDD Transportation Inc. General Directorate nke ọkwa ahụ mere na saịtị weebụ KPSS 2017 / 2 dịka ndị sitere na ndị nominepụtara site na ndị a họọrọ. Na ọkwa nke TCDD Taşımacılık A.Ş. Ndị Candidates na-enweta ọrụ na ndepụta ahụ nwere ike ịmalite na-echeghị ịkpọ òkù na adreesị ha N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, a kpọsara ndị ahụ a họpụtara ahọpụta ozugbo na listi ndị e bipụtara ka ha ghara inwe ike ịga ọrụ. KPSS 2017 / 2 1. KPSS 2017 / 2 2 2017 2 3 KPSS XNUMX / XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX
TCDD Transport Corporation KPSS 2017 / 2 Ọrụ Nsonaazụ 4. Dezie ọkwa 03 / 04 / 2018 TCDD Transportation Inc. General Directorate nke ọkwa ahụ mere na saịtị weebụ KPSS 2017 / 2 dịka ndị sitere na ndị nominepụtara site na ndị a họọrọ. Na ọkwa nke TCDD Taşımacılık A.Ş. Ndị Candidates na-enweta ọrụ na ndepụta ahụ nwere ike ịmalite na-echeghị ịkpọ òkù na adreesị ha N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, a kpọsara ndị ahụ a họpụtara ahọpụta ozugbo na listi ndị e bipụtara ka ha ghara inwe ike ịga ọrụ. KPSS 2017 / 2 1. KPSS 2017 / 2 2 2017 2 3 KPSS XNUMX / XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX
TCDD Transport Corporation KPSS 2017 / 2 Ọrụ Nsonaazụ 8. Dezie ọkwa 12 / 07 / 2018 TCDD Transportation Inc. General Directorate nke ọkwa ahụ na ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị nke ndị mmeri a na-etinye na XSSX 2017 / 2 8. A mara ọkwa a. Na ọkwa nke TCDD Taşımacılık A.Ş. Ndị Candidates na-enweta ọrụ na ndepụta ahụ nwere ike ịmalite na-echeghị ịkpọ òkù na adreesị ha N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, a kpọsara ndị ahụ a họpụtara ahọpụta ozugbo na listi ndị e bipụtara ka ha ghara inwe ike ịga ọrụ. KPSS 2017 / 2 1. KPSS 2017 / 2 2 2017 2 XNUMX KPSS XNUMX / XNUMX sitere na ndị a họọrọ
TCDD Transport Corporation KPSS 2017 / 2 Ọrụ Nsonaazụ 5. Dezie ọkwa 28 / 04 / 2018 TCDD Transportation Inc. General Directorate nke ọkwa ahụ mere na saịtị weebụ KPSS 2017 / 2 dịka ndị sitere na ndị nominepụtara site na ndị a họọrọ. Na ọkwa nke TCDD Taşımacılık A.Ş. Ndị Candidates na-enweta ọrụ na ndepụta ahụ nwere ike ịmalite na-echeghị ịkpọ òkù na adreesị ha N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, a kpọsara ndị ahụ a họpụtara ahọpụta ozugbo na listi ndị e bipụtara ka ha ghara inwe ike ịga ọrụ. KPSS 2017 / 2 1. KPSS 2017 / 2 2 2017 2 3 KPSS XNUMX / XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX
TCDD, TCDD Transport na TÜVASAŞ Ọrụ Ọrụ E bipụtara mkpebi na Official Gazette 13 / 05 / 2017 E bipụtara Mkpebi nke TCDD, TCDD na TÜVASAŞ na Official Gazette: TCDD, TCDD Transportation Inc. na mkpebi Tüvasaş a na-ebipụta na Official Gazette taa. Dịka mkpebi ndị e bipụtara na Gazette Official; The Republic of Turkey State Railways (TCDD), Transport Joint Stock Company General Director na onyeisi oche nke State Railways Enterprises General Directorate Deputy Director General Veys Kurt, TCDD General Directorate Board Member İsmet Gyroscopes, Turkey n'ụgbọala Industry Corporation (Tüvasas) General Manager na A họpụtara Ilhan Kocaarslan dị ka Onyeisi oche nke Board of Directors.
Ọkwa ọkwa TCDD
Nounma ọkwa TCDD Central
Ọkwa ọkwa nnabata nke TCDD
TCDD Ụgbọ njem KPSS 2018 / 1 Ịkpọ ọkwa ọkwa
KPSS 2017 / 1 na ọkwa TüLOMSAŞ
TCDD Transportation Inc. kwupụtara KPSS 2017 / 2 Ọrụ Nsonaazụ
TCDD Transport Corporation KPSS 2017 / 2 Ọrụ Nsonaazụ 2. Dezie ọkwa
TCDD Transport Corporation KPSS 2017 / 2 Ọrụ Nsonaazụ 3. Dezie ọkwa
TCDD Transport Corporation KPSS 2017 / 2 Ọrụ Nsonaazụ 4. Dezie ọkwa
TCDD Transport Corporation KPSS 2017 / 2 Ọrụ Nsonaazụ 8. Dezie ọkwa
TCDD Transport Corporation KPSS 2017 / 2 Ọrụ Nsonaazụ 5. Dezie ọkwa
TCDD, TCDD Transport na TÜVASAŞ Ọrụ Ọrụ E bipụtara mkpebi na Official Gazette